अन्धाले हात्ती छामे जस्तो निर्वाचन आयोगको निर्णय - Halesi Khabar
अन्धाले हात्ती छामे जस्तो निर्वाचन आयोगको निर्णय
१३ माघ २०७७, मंगलवार २०:०२ ।
गएको पुस ५ गते जनताको वारेस लिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुको महत्वपूर्ण संस्था प्रतिनिधिसभाको हठात विघटनपछि देशमा नयाँ खालको राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना भयो । योभन्दा अगाडि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र मात्र देखिएको राजनीतिक उत्तार चढावले नयाँ दिशा समात्यो ।
राजनीति वृत्तमा नयाँ हङ्गामा देखिएपछि यसले प्राय निदाइरहेका जस्ता प्रतिपक्षलाई झस्काइ दियो । उनीहरु हतपत गर्दै बिउँझिए । सबैले चनाखो हुँदै आफ्नो उपस्थित कहाँ हो भनेर सोच विचार गर्ने र अभिव्यक्ति दिन थाले । अलि ढिलो गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउव बिउँझिए । उनलाई उनकै पार्टी वरिष्ठ नेताले झकझक्याएपछि ब्युँझिएको पनि देख्न पाइयो ।
यता कारण र कारक बनेको नेकपाभित्र चर्कोरुपमा देखिएको दुईलाइनका सङ्घर्ष स्पष्टसँग विभाजनको बाटोमा लाग्यो । पार्टी एकीकरण गरेको करिब तीन वर्षमा फेरि एकता विभाजनमा पुग्यो । पार्टी एकीकरणका कामहरु नसकिदै पार्टी फुट्यो । छुट्टाछुट्टै समूहमा बैठकहरु शुरु भए । पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटि हुँदै केन्द्रीय समितिसम्मको बैठकहरु छुट्टाछुट्टै आयोजना गरेर पार्टी विभाजन भइसकेको सन्देश बाँढियो ।
पार्टी दुईवटा भएपछि दुवैपक्षलाई पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमा गलफत्ती पर्ने नै भयो । यसका लागि पूर्वतयारीका साथ निर्वाचन आयोगमा आफ्नो आधिकारिकताका लागि दावी हुने नै भयो । दुवैले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हका लागि दावी पेश गरे । निर्वाचन आयोगले कानून सम्मत गर्ने भन्यो । यसपछि केही दिन लगाएर निर्वाचन आयोगले एउटा चिङ्गे (छनक) देखायो ।
आयोगले स्पष्ट रुपमा विभाजित भइसकेको पार्टी नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई दाबी गर्न आउने र ओली समूहलाई विवरण अध्यावधिक गर्न भनेर छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर आफूलाई तटस्थतालाई गुमाउने कोशिस गरेको थियो । यसपछि तत्काल प्रचण्ड–नेपाल समूहको खबरदारीले गर्दा फेरि उस्तै प्रकृति र समान किसिमको पत्र पठाउनु पर्ने आयोगलाई बाध्यता पारियो । यसपछि आयोग आन्तरिक तयारीमा जुट्यो । यसबीचमा देखिने केही नभएपनि नदेखिने कामहरु भएका रहेछन् भन्न सकिने ठाउँ अहिले आएर देखियो ।
जब कि आयोगको कानून शाखामा भएका कर्मचारीको रातारात सरुवा हुनु र उक्त ठाउँमा नया मान्छे सरुवा ल्याउनु यसको नमुना मात्र होला । यसपछि ११ गते माघको साँझमा आयोगले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक ग¥यो । नेकपा भन्ने पार्टीका दुईवटै समूहलाई अलमलमा पारेको छ । झट्ट हेर्दा तत्कालीन हिसाबमा ओली इतर समूहले काखी बजाउन मिल्ने किसिमको निर्णय आएको जस्तो देखिएको छ । आयोगले आफ्नो निर्णयमा २०७५ जेठ २३ को विवरण र विधानलाई मान्यता दिने भनेपछि ओली समूहमा एक किसिमको विजयीभाव देखा परेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयलाई आयोगले स्वीकार गरेन । यसमा ओली समूहका अध्यक्ष केपी ओलीले खुशी नै व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, अर्कोतिर नयाँ सदस्य थपेर १५०० सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनाउने अध्यक्ष ओलीको निर्णयलाई पनि आयोगले अस्वीकार गरेपछि उनीहरुलाई पनि यसले एक प्रकारको निराश भने पारेको छ ।
आयोगले नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै वैध भनेर भनेपछि तत्कालीन समयमा भएको ४४१ केन्द्रीय सदस्य, ४५ जनाको स्थायी कमिटी नै वैध हुने भएको छ । ४५ जनामध्ये २८ जना प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग छ । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये ४३४ जना हाल रहेका छन् । उनीहरुमध्ये ३०० बढी प्रचण्ड–नेपाल समूहसँगै रहेका छन् ।
आयोगले बीच धारमा बसेर निर्णय लिएपछि निर्णयको छेउछाउ कोट्याएर दुवै पक्षले सन्तोष पनि मानेका छन् । आयोगले भने दुवै समूहको बीचमा हात्ती उभ्याइ दिएको छ । अन्धाको अगाडि हात्ती उभ्याएर छाम्न लगाएको छ । अन्धाहरुले भने हात्तीको खुट्टालाई खम्बा भनेको छन्, शरीरलाई भित्ता मानेका छन्, कानलाई नाङ्लो ठानेका छन् । यसरी उनीहरुले सन्तोष मानेपनि भविष्यलाई लिएर भने दुवैको मनमा संशय देखिन्छ । अब हुने के भनेर दुवै समूहको कार्यकर्ता लेबलमा निकै उत्सुकता बढेको छ ।
अब दुवै पक्षसंँग विकल्प कि अविलम्ब अदालत जाने या अरु आधिकारिकताका लागि विभाजनको औपचारिक घोषणा गरेर दल दर्ताको निवेदन दिने भन्दा अरु विकल्प देखिएको छैन । यसमध्ये पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफ्नो ४४१ सदस्य मध्येको बहुमतले निर्णय गर्दै अगाडि बढ्दै जाने र पेल्दै जाने हो भने ओली समूहले अर्को यात्रा तय गर्न सक्दछ ।
हाल प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा कानूनमा भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दल विभाजन गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचित संसदको ४० प्रतिशत र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत भन्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ३० प्रतिशतमा झारेर नयाँ दल दर्ता गरेर जाने हुन सक्छ ।
या यस अघिनै दर्ता भइसकेको सन्ध्या तिवारीको अध्यक्षतामा भएको एमालेसँग मिल्ने हो यो विकल्प आउन सक्छ । अन्यथा निर्वाचन आयोगमै अल्झिने हो भने बाध्यात्मक अवस्थामा ओली समूहले आधिकारिकता गुमाउन सक्दछ । बाँकी देखिदै जाने कुरा हुन् ।
क्यान्सरपीडित सविताद्धारा उपचारमा सहयोग गर्न अपिल
दिक्तेलमा सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेनपार्क निर्माण तथा सडक ढलान गर्ने तयारी
नेकपा प्रमुख सचेतकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराई
पाथेकामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
मझुवागढी रणजितमान कप फुटबल प्रतियाेगितामा रतन्छाकाे विजयी शुरुवात
१. मकैको खोसेलाबाट आकर्षक घरायसी सामग्री उत्पादन
२. क्यान्सरपीडित सविताद्धारा उपचारमा सहयोग गर्न अपिल
३. दिक्तेलमा सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेनपार्क निर्माण तथा सडक ढलान गर्ने तयारी
४. नेकपा प्रमुख सचेतकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराई
५. पाथेकामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
६. मझुवागढी रणजितमान कप फुटबल प्रतियाेगितामा रतन्छाकाे विजयी शुरुवात